श्रीमानको सपना साकार पार्न म नयाँ शक्तिमा लागेँ | OnlineChautari.com
October 4, 2016 | 1:33 pm
काठमाडौं, १८ असोज । मेरो नाम रुबिना खान हो । मेरो माईतिघर तनहुँको व्यास नगरपालिका वडा न २ मा पर्छ । म सन् २००९ मा स्नातक तह अध्ययनको लागि नेपालबाट लन्डनको सुन्दर विश्वविद्यालयमा पुगेको थिएँ । म त्यहाँ श्रीमान् र छोराको साथमा बस्थ्याँ । करिब ६ बर्ष लन्डनमा बसेर आफ्नो अध्ययन सकेर म अहिले नेपालमा छु ।
मेरो जीवनमा सन् २०१३ ठुलो पीडा बोकेर आयो । लण्डनबाट सन् २०१३ मा म, श्रीमान् र छोरा नेपाल आएका थियौं । नेपाल घुम्नका लागि आएको त्यो समयमा हामि काठमार्डौमा तीनै जना मोटरसाईकलमा यात्रा गर्दै थियौं । त्यही समयमा हाम्रो मोटरसाईकल ट्राफिक चेकिङमा पर्यो । त्यही बेलामा पछाडिबाट आएको मिनिबसले हाम्रो मोटरसाईकललाई ठक्कर दियो । मिनिबसको ठक्करले श्रीमानको मृत्यु भयो । त्यसपछिको मेरो जीवन ठुलो संकट र दुखकोबिचबाट अगाडि बढ्यो ।
श्रीमान् गुमाएकी मलाई घरपरिवारको व्यावाहरले थप पीडा दियो । स्याङजा बस्ने आफ्नै सासु-ससुराले म माथि ‘मेरो छोरा खार्इ’ भन्दै अनेकन आरोप लगाए । घरबाट सासु ससुसाले निकालेपछि म छोरासहित माइतिको शरणमा पुगेँ । म अहिले एक मन्टेश्वरी स्कुलमा पढाउने काम गरि जीवनको गुजारा चलाईरहेको छु ।
सासु ससुराले पनि घरबाट निकाले पछि लन्डन बसाई छाडेर माइत बसेकी मलाई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीले आर्कषित गरायो । त्यसो त मेरो श्रीमानको सधै जनताको हकअधिकारको लागि लड्ने इमान्दार र विकासवादी नेताको रुपमा बाबुरामको प्रशंसा गरिरहनुहुन्थ्यो । उहाँले मसंग सधै लन्डनबाट नेपाल फर्किपछि डा. बाबुराम नेतृत्वको नयाँ शक्तिमा लाग्ने बताउँनुहुन्थ्यो । श्रीमानको सपना अनि आफुलार्इ पनि बाबुराम र उनको नीति मन पर्ने भएकाले म पनि नयाँ शक्तिमा लाग्ने निर्णयमा पुगेको छु ।
म एकल महिलालार्इ समाजमा हेर्ने दृष्टिको बिरुद्ध राजनीतिमा लाग्न लागेको हुँ । बाबुरामको अभियानलार्इ आफ्नो क्षमता अनुसार सहयोग गर्ने भन्दै म नयाँ शक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेको हुँ । त्यसभन्दा ज्यादा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टरार्ई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीमा लाग्ने आफ्नो श्रीमानको सपना पुरा गर्न पनि म आफुनै नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेको हुँ । यसमा मलाई धरै गर्व छ ।
खेमराज पन्त एक सफल व्यवसायी हुन् । नेपालको कुरियर क्षेत्रका हस्ती पन्त अहिले नेपाल कुरियर संघका अध्यक्ष पनि हुन् ।…